Deeqda TAN – Mayo Street Arts
Deeqda TAN waxay bixisaa deeq yar oo $500-1,000 ah si looga gudbo caqabadaha dhaqaale ee mudada gaaban iyo in loo dhigo sayska yoolasha mudada dheer. Nidaamka waxaa loogu talo geley inuu siiyo farshaxanka caqabad yar, khibrada kowaad ee arjiyada deeqda.
Deeqdu waxaa loo adeegsan karaan in lagu taageero hawlo kala duwan oo ay kamid yihiin in farshaxanka loo siiyo lacagta si ay usoo bandhigaan iyo inay baraan dadka, iibsiga xayaysiis munaasabad, duubista fiidyaw iyo soo saar, sawiro, nashqadayn websayt, kharashka gaadiidka, iibsiga agab iyo qalab, iyo meel uu ku barbarto.
Deeqda TAN waxaa maamusha Mayo Street Arts oo waxaana qiimeeya Gudida Deeqda TAN kuwaas oo ka kooban farshaxan bulshada ah iyo u ololeeyayaal dhaqanka kamid ah bulshooyinka Afrikaanka ah ee Portland iyo Lewiston/Auburn.
MUDADA AY KU EEG YIHIIN ARJIYADA WAKHTIGAN: MAAY 30, 2022
Guji halkan si aad u aragto arjiga PDF-ka.
Turjubaano iyo dadka tusaaleyaal ah ayaa la heleyaa kaa caawinaya buuxinta arjiyada. Si aad u dalbato kaalmo, fadlan iimeel u dir TAN@mayostreetarts.org ama kala hadal Mayo Street Arts 207-879-4629.
Deeqda TAN waxaa suurto geliyay taageero laga helo Gudida Farshaxanka Maine, hay’ada madax banaan oo gobolka ah oo ay taageerto Tixgelinta Qaran ee Farshaxanka.